ChiGerman, Germany Inotaura Zvimwe - GERMAN
1 2 3 4 5 ... 4481 Enda pasi
0 Nhengo uye 13 Vashanyi vari kuona nyaya yacho.
Re: Kutaura Kunotaura Pachena
« Reply #11: Musi waFebruary 11, 2008, 01:40:00 am »
Pamwe ini handidi iye musikana zvakadaro, uye ivo havaite.
(makuhwa akasunungukawo haaa)
« Reply #12: Musi waFebruary 11, 2008, 01:45:25 am »
Usazviite, nzwira tsitsi musikana wako yaw ...
kugumburwa nemhanza yako, tichatii manje ..
Vhiki rino, zvakare, ndizivise kuti ini handisi kuzoteedzera zvakanyanya kwesvondo rakabatikana zvikuru apo vanakomana vangu vachadzingiswa
Ngatione kana tichigona kupfuura pasina tsaona uye kudzingiswa kwemvura ...
« Reply #13: Musi waFebruary 11, 2008, 01:45:54 am »
Yakatorwa kubva: jentzsch - Kukadzi 11, 2008 na01: 40: 00 am
Ehe, jaaa, chaunoti musikana chichava chidiki chidiki.
Chii iye ... ohhh musikana uya.
Yakakodzera asi (Ayyyy takaipa sei isu seizvi)
« Reply #14: Musi waFebruary 11, 2008, 01:48:14 am »
Yakatorwa kubva ku: sinemm - Kukadzi 11, 2008 pa01: 45: 25 am
Uya nyore ipapo.
Ndinokushuvirai kunakidzwa kwakawanda, Mai Sinem.
Uchadurura honye dzako zvakanaka izvozvi, pamuchato wekudzingiswa.
Kana hausi muchato here?
« Reply #15: Musi waFebruary 11, 2008, 01:54:26 am »
Muchato uchaitika muIzmir, kana ALLAH akautarisira ...
pachave nemawlut chete uye maitiro ekudzingiswa ...
Mhuri yehama yangu haizoone kudzingiswa muIzmir
Isu tinotsvaga tarisiro, chii chatingaite, alistik izvozvi ...
asi hutano hwevakomana hwakakosha kupfuura chero chinhu ...
Chii chakaitika jentzsch?
« Reply #16: Musi waFebruary 11, 2008, 01:56:49 am »
Manheru akanaka munhu wese, shamwari.
« Reply #17: Musi waFebruary 11, 2008, 01:58:09 am »
husiku hwakanaka changamire titambirei chii chamungatenge seanotapira?
« Reply #18: Musi waFebruary 11, 2008, 01:58:46 am »
Husiku hwakanaka kune wese munhu, futi.
Mangwana ndichaenda kuzita rangu rakavanzika sekuziva kwamunoita.
Manheru akanaka .
Ivai vakapiwa kuna ALLAHA.
« Reply #19: Musi waFebruary 11, 2008, 01:59:09 am »
ee kholpasali andiudza, research irikuenda sei ???
« Reply #20: Musi waFebruary 11, 2008, 01:59:18 am »
Ini ndinogona kuve nehukama seanotapira uye hushamwari mumenyu huru.
« Reply #21: Musi waFebruary 11, 2008, 02:00:30 am »
esma ndiwe here james bon?
007 kana chimwe chinhu iye?
joke, huya unaku, mangwana unofanirwa kuve unonamata
Mwari ngavape rugare ... hope dzinotapira ..
1 2 3 4 5 ... 4481 Enda kumusoro